တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးရာဌာန၊ ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတို့အကြား အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးရာဌာန၊ ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရတို့အကြား အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲက ကျင်းပသည်။
ဆွေးနွေးပွဲပထမပိုင်းအစီအစဉ်တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပေးပို့သောသဝဏ်လွှာအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်မှ ဖတ်ကြားရာ ယနေ့ဆွေးနွေးပွဲသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံအကြား နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနှင့် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးကို အခြေခံပြီး ဆောင်ရွက်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့်ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အစိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာများ သွက်လက်မြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် e-Government လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသကဲ့သို့ ကပ်ရောဂါကာလ စိန်ခေါ်မှုများ၊ အခက်အခဲများကို အခွင့်အလမ်းများအဖြစ် အသုံးချလျက် အစိုးရဌာနများ၏ ပြည်သူ့ရေးရာဝန်ဆောင်မှုများကို ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်းသို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ အလားတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် e-commerce စနစ်ကို အချိန်မီ လက်လှမ်းမီအသုံးပြု ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိုလည်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ လူနေမှုဘဝများ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ရေးဟူသည့် ကပ်ရောဂါနှင့်အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်သည့် New Normal အနေအထားတွင် အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းတို့သည် အချိန်ကိုက် ပေါ်ပေါက်လာသည့် ထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို e-commerce စနစ်ကို တိုးမြှင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်မပျက် ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်သလို ကုန်ကျစရိတ်များကို ချွေတာလျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ ငွေကြေးကိုင်တွယ် စီမံခန့်ခွဲရန် ပိုမိုလွယ်ကူခြင်း၊ ဈေးကွက်ပိုမိုရရှိလာနိုင်ခြင်း၊ အချိန်နှင့် လူအင်အားအသုံးပြုရမှုများ လျော့နည်းစေခြင်း စသည့်အကျိုးတရားများ ရရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့် ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရတို့အကြား ကျင်းပသည့် ယနေ့ ဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကာလအတွင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ဒီဂျစ်တယ်ခြေလှမ်းသစ်တစ်ရပ်ကို တက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများအား e-commerce စနစ်ဖြင့် ပေါင်စည်းမြှင့်တင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း၊ ကပ်ရောဂါ၏ စိန်ခေါ်မှုကို အတူတကွကျော်လွှားပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖော်ဆောင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် တို့ကလည်းကောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံတကာရေးရာဌာန (IDCPC) မှ ဝန်ကြီး Mr. Song Tao၊ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီမှ ဒုတိယဝန်ကြီး Mr. Guo Yezhou၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာချန်းဟိုင် တို့ကလည်းကောင်း အမှာစကား ပြောကြားကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲကို နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောတူညီချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ အခြေအနေအောက် စွမ်းဆောင်မှု အတွေ့အကြုံဆွေးနွေးရန်၊ ဒေသနှစ်ရပ် လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခိုင်မာစေရန်၊ နှစ်နိုင်ငံနှင့် ဒေသနှစ်ခုအကြား BRI နှင့် တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြံမူဘောင်အောက်မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံလူမှုစီးပွား လျင်မြန်စွာနာလန်ထူရန်၊ အထူးသဖြင့် ယူနန်ပြည်နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့အကြား Digital economy၊ E-commerce၊ ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးစသော နယ်ပယ်များ တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအား ဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ဆွေးနွေးပွဲဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Vol.VII, No. 111, Wednesday,5August 2020
Posted on Aug 05, 2020 Download
Vol. VII, No.110, Tuesday,4August 2020
Posted on Aug 04, 2020 Download
Vol. VII, No.109, Monday,3August 2020
Posted on Aug 03, 2020 Download
Vol. VII, No.107, Saturday, 1 August 2020
Posted on Aug 01, 2020 Download